Jumeira University - Yepamusoro kwose Dubai, ari Brazil
Acronym : CHOKWADI
Musakanganwa kuti kurukura Jumeira University
Kunyoresa pa Jumeira University
Jumeira University chiri Accredited, voga dzidzo yunivhesiti kuti anogadzirira vadzidzi kuti mabasa nyanzvi Business, dzidzo, Health Sciences uye Islamic uye Arabic Studies.
Tinosungirwa kupa yepamusoro uye kutsigira mamiriro ezvinhu pakudzidza kuti vanoziva tarenda nokuriritira zvinangwa.
Tinorupa kutema unopinza zvemichina zvivako vane nzira kudzidza muna Chirungu uye Arabic uye zvinopa vakaparadzana pakudzidzisa uye kuzvivaraidza zvivako kuti vanhurume vadzidzi.
Welcome to inonakidza rwendo dzidzo pamwe Jumeira University.
Pana Jumeira University tinotevera munhu RUBATSIRO RUNOTARISA nzira dzidzo kuitira kukudziridza kwedu vadzidzi kupinda vanhu akashongedzerwa kuti shasha vanorarama ose oupenyu uye kuratidza muoni Mindset of Zimbabwe.
Kuburikidza dzingaparwe umbirimi, kuremekedza tsika, tsika uye chitendero, uyewo kuna pakudzidza, tinovavarira kukukurudzira kuzadzisa zvedzidzo uye pachake dzenyu potentials kurambe kuchikura.
Tinodada tsika dzedu uye tsika. Zvatinotenda uye tsika ndidzo pakona ibwe yedu yokutaura kuti yedzidzo mamiriro ano wakagumbatira Islamic tsika uye tsika dzomunzvimbo.
Vadzidzi pana Jumeira University, tinovimbisa kwechokwadi ruzivo pakudzidza. Tinowana here kufunga nezveremangwana rako, ziva nzira uye kuva munhu unoda kuva: mutoro, vakabudirira uye zvinokosha mari munharaunda yako.
Ngatienderanei sezvatava watangawo kudzidza, yakawanikwa uye chido.
Unoda kurukura Jumeira University ? chero mubvunzo, Mashoko kana wongororo
Jumeira University musi Map
Photos: Jumeira University pamutemo Facebook
Jumeira University wongororo
Join kukurukura pamusoro Jumeira University.
University of Wollongong muna Dubai Dubai